शेखर बने देउवाका चुनौती – TajaNepal
Home /Blog/शेखर बने देउवाका चुनौती
आर्थिकMarch 7, 2019
काठमाडौँ । मौका पर्दा राजदरबारमा प्रजातन्त्रको किस्ती बुझाउने शेरबहादुर देउवाले काँग्रेसमा वंशवाद चल्दैन भन्दै गर्दा पार्टीमा गुटवाद र लुटवाद चलाएको धेरैलाई मन परेको छैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दरिलो खुट्टा नटेक्दा र पदका निम्ति मरिहत्ते गरेर सभामुखको मर्यादा र उपप्रमको गरिमा राख्न नसक्दा खस्किएको तौल सुकेको पात झैँ खोलामा तैरिएको काँग्रेसी जनहरूबीच छिपेको छैन । यस पटक भने पौडेलले सभापतिहरूको मान राखे । कोइराला परिवारले एकजुट हुन्छौँ भन्दा देउवालाई किन रिस ? समयमा पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरूको विधान दिन नसक्ने, कार्यकर्ता धान्न र मुलुक लुट्न सफल शेरबहादुर देउवालाई चुर्लुम्म डुबाउने डा. आरजु देउवा, भूषण राणाहरू जस्ता धेरै छन् । पछिल्लो पटक पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक शैलीमा चाउन नसकेको अवस्थामा देउवाले आफूले कुन अवस्थामा कस्ताको सहारामा सभापति जितेका हुन् ? पत्तो पाएका छैनन् । वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिदको सुरुको भुक्तानीपछि प्राप्त कमिसन देउवा पत्नी आरजुले बुझेकाले यो केसको रू. ४ अर्ब ५७ करोड ३५ लाखको छानबिन हुने छाँट छैन । काँग्रेसलाई जोगाउँदा वर्तमान सरकारका लुटाहाहरू समेत कारबाहीबाट बच्न पुगे । देउवा जापानकी राजदूत प्रतिभा राणालाई फिर्ता नगर्न प्रमसँग निकै धाएका हुन् । राणा देउवाकी सासू हुन् । मुलुकमा बेरोजगार बढाउने कमिसनमा सिंहदरबार चलाउने शेरबहादुुर देउवाको टिममा जति खडा छन्, उनीहरू स्वच्छ र निष्कलङ्कित भएको भए देउवाले डा. शेखर कोइरालाको खप्की खानुपर्ने थिएन । हिजो देउवाका विश्वासी डा. प्रकाशशरण महत ऊर्जामन्त्री बन्दा कति कुकर्म गरेका थिए ? पत्रिकाको पाना पल्टाए भेटिन्छ । देउवाकै हनुमान नैनसिंह महरले नेविसङ्घलाई सहजरूपमा चलाउन सकेनन् । जसरी देउवा बुथबाट निर्वाचित होइन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकेनन् । नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता रामचन्द्रमा पनि छैन । यी दुवै जना मिले पनि अबको काँग्रेसमा डा. शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौला मिले भने १४औँ महाधिवेशनमा यिनको हालत देखिन्छ । कार्यकर्तामा अविश्वास र जिल्ला सभापतिहरूप्रति घात गरेका शेरबहादुरका लागि अबका चुनौती डा. शेखर बन्दैछन् । समयमा काम गर्न नसक्ने प्रतिनिधिहरूको तोजोबध गर्नेलाई महाधिवेशनमा थान्को लगाउने अवस्था आउँछ । डा. शेखरका पछाडि बद्नाम पात्र सुजाता छिन् । महामन्त्री पदमा चुनाव जितेर पार्टीलाई विधानमा हिँडाउन नसक्ने डा. शशांकले पुर्खाको बिँडो थाम्दैनन् । तर उनलाई देउवाले तिमी सभापति भनिदिएर पारिवारिक विभाजन नगर्लान् भन्न सकिँदैन । अबको काँग्रेसमा जस्तोसुकै भए पनि नेतृत्व डा. शेखर र सिटौलाको पोल्टामा जानै पर्ने बाध्यता छ । किनकि देउवाका गल्ती यिनीहरूले प्रतिवाद गरेका छन् । युवा पुस्ता यिनको पक्षमा छन् । देशको उद्योग बेच्ने काँग्रेस हो । बेरोजगार बढाउने काँग्रेस हो । भ्रष्ट ठेकेदारहरू काँग्रेसकै धेरै छन् । शैक्षिक माफिया, अस्पताल माफिया, वैदेशिक रोजगार माफिया काँग्रेसकै छन् । चिकित्सा माफियाले देशका गरीब जनताको दोहन गरेकै छन् । कालो बजारका नायकहरू काँग्रेसकै छन् । प्रजातन्त्रको नाम जप्दै अधिकार दरबारमा बुझाउन सफल शेरबहादुर अमेरिकी दलाल हुन् । त्यही कारण नेपालमा जस्तै जनताबाट निर्वाचित भेनेजुएला विवादमा देउवा अमेरिकी साम्राज्यको पक्षमा उभिए । अब पाकिस्तान र भारत युद्धमा भारतको पक्षमा कुर्लेलान् ?
८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा फरक–फरक मत राख्ने १९ जना देखिँदा शेरबहादुरले जिल्ला सभापतिहरूका बीच गरेको सम्झौता तोड्दा कसले स्याबासी दिन्छ ? रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, सरिता प्रसाई, गुरुराज घिमिरे, डा. रामशरण महत, दिलेन्द्र बडु, सीतादेवी यादव, चन्द्र भण्डारी, नवीन्द्रराज जोशी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, प्रदीप पौडल, बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादव, बालकृष्ण खाँण, शङ््कर भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, पुष्पा भुसाल, शीला खड्का जस्ताको नेकाँमा अस्तित्व छैन ? यिनीहरूले देउवाको अत्याचारका बारेमा जिल्ला दौड गरे भने कति जनालाई देउवाले अनुशासनको कारबाही गर्छन् ? जबकि अनुशासन समिति बनेकै छैन । चुनाव भएको वर्ष दिन कटिसक्दा कारबाही गर्ने कसलाई ? देउवाका दूतहरूलाई बुथबाट निर्वाचित नहुने डर के हो ? के सभापतिहरूको भेला रक्सी खान आयोजित भत्तेरमा सीमित हो ? रामचन्द्रले खुट्टा दरिलो टेक्ने भएकाले डा. शेखर कोइराला आफ्नो अभियानमा खटेका हुन् । टाउकाको मूल्य तोक्ने प्रजातन्त्रवादी मुलुकलाई सङ्घीयता, गणतन्त्रको आम्दानी दिलाउने प्रजातन्त्रविरोधीको संज्ञा दिने मानवअधिकारको नकाब लगाउनेहरू डा. आरजुका आम्दानी हुन् भन्ने धेरैले बुझेका छन् ।
त्यही कारण अब काँग्रेसमा व्यापक सुधारको जरुरी भएको हो । आफ्नो कमाइमा युवा नेताहरू पनि पछाडि छैनन् । जो मौकामा मन्त्री भए, उनीहरूले आफ्नो पालालाई पुग्ने कमाए । । जो भएन, तिनले दलाली र बिचौलियाको काम गरेर थुपारेका छन् । शुद्धता नेकाँमा छैन । त्यही कारण अहिले संसद्मा दर्जनौँ मुद्दा छन् तर त्यो काँग्रेसले उठाउँदैन । सडकको ठेक्का, सिँचाइको ठेक्का, विद्युत् गृह निर्माणको ठेक्का मात्र होइन, वाइड बडी खरिदको भुक्तानीसमेत काँग्रेस सरकारमा रहँदा ग¥यो, दुई भाग खायो । तर काँग्रेसमा सबै दलाल र बिचौलिया छैनन् । त्यही कारण डा. शेखरहरू शेरबहादुरको लथालिङ्ग शैलीविरुद्ध उत्रन सकेका हुन् ।